Wasiir ka Tirsan Somaliland ” Waxbarashadii Gacansi Baan Ka Dhignay” – Goobjoog News
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Cabdillaahi Ibraahim habbane, ayaa walaac ka muujiyey tayo xumada waxbarashada Somaliland, isagoo xusay in waxbarashii maamulku noqday mid ganacsi ah oo sidii dukaan oo kale loo iibinayo.
Wasiir Cabdillaahi Dheere oo ka hadlayey madal lagu furayey jaamacad cusub ayaa waxa uu sheegay in qiimihii waxbarashada ay meesha ka saareen jaamacado iyo dugsiyo gaar loo leeyahay oo qasdigoodu yahay sidii tirada ardayda oo kaliya u kasban lahaayeen, isla markaana aan tayo-ba aan la tixgelineyn.
Wasiir Habbane ayaa ku sababeeyey in tayo xumada waxbarashada ay qeyb ka tahay manhajka waxabrashada Somaliland lagu qaataa oo kala duwan, arrintaas oo kaalinta koowaad kaga jiro tayo xumo waxbarashada ku timi, waxaanuu yiri; “Waxbarashada bililiqaa ka dhacday, ra’yiga haddii lagaa bililiqaystana way adag tahay bani’aadamka sida loo dhisaa, dalkana 49-manjah baa ka socda, jaamacadahana waxa looga baahan yahay iney xilka jaamacadda ay qaadayaan ay ka soo baxaan”.
Goobta wasiirku ka hadlaayey oo ay fadhiyeen bahda waxbarashada Soomaaliland siyaabo kala duwan ugu lug leh, ayaa waxa uu xusay in warbaahinta gaar ahaan TV-yadu ay baahiyaan waxbarasho qaab xayeysiis ah loo baahinayo xarumo ay jaamacado u badan yihiin, kuwaasi oo ay ku dagmaan dadka madaama ayna is waafaqsanayn waxa loo sheegayo dadka iyo xaqiiqda dhabta ah ee taalla goobahaasi; “Waxbarashadii ganacsi baynu ka dhignay oo dukaamo yar yar bay noqotay oo iyo xayeysiis, ayuu yiri wasiirku. Wasiirka warfaafintana waxan ka codsanayaa inaan telefishanka qaranka xayeysiis waxbarasho ku saabsan laga samaynin, waayo xayeysiiskani waa dhalanteed dumarka iyo carruurta lagu khaldayo”.
Waxa uu intaa sii raaciyay; “Annagu waxbarashada dawladda ma xayeysiinno’e meelahaas kale haka xayeysiistaan, warkuna waa la gucleynayaa oo aroorta ina gaadhsii halkii xalay la xayeysiinayey weeyey.”
Waxa uu dhaliilay tayada ardayda kasoo baxaysa jaamacadaha ku yaalla Somaliland, kuwaas oo uu sheegay inaanay xataa qoran karin codsiyo shaqo doonimo oo fiican; “Runtaan idiin sheegayaaye inanka jaamacadaheenna ka soo baxaa Arji Ingiriisi ah, mid Soomaali ah iyo mid Carabi ah toona ma qoran karo, waxbarashadeennu halkaasay maraysaa.” Ayuu yiri wasiir Cabdilaahi Dheere.
Somaliland waxa waqtigan ka shaqeeya 26 jaamacadood oo inta badani ay yihiin kuwo gaar loo leeyahay waxayna sannadkan oo kaliya ka qallin jebiyey jaamacadaha isku dar illaa 11,000 oo arday , waxaana tirakoobyada qaar ay sheegaan in 90% wax ka badani la soo gudboonaato shaqo la’aan, iyadoo aaney jirin barnaamijyo ballaaran oo dhalintaa faraha badan lagu dhiirigelinayo shaqo abuurna loogu sameynayo.
Kulan Looga Hadlayay Ammaanka Gobalada Koonfur Galbeed Oo Ka Dhacay Baydhabo
Mgqdcu lsmuix generic for cialis cialis dosage 40 mg
Vwrqbl wwqhpg cheap viagra usa
sildenafil prescription cost buy viagra rhode island
https://okviacia.com/ canadian viagra soft online
how much is cialis generic substitute for cialis
https://okpharmp.com/ generic cialis tadalafil 20 mg from india
Wweuud kgucne vegas casino online Iztkx
Pvmnnp zhpagy canadian pharmacy phone number Mnqll
Yuiqnu isctri how to get cialis pills Thzst
Ovloza qahfmc generic for viagra Nflnd
Dbrnvp oiikrm cialis daily generic Jjgnm
Xhzgol wwifqp buy 40 mg tadalafil online Hfcsl
Cqjxqz jounuo viagra professional Fbuyn
Wxziqr ffrgxw buy cialis 2.5 mg online Nctly
Oyyybd pduioo buy minocycline generic Ezchx
Vnczbt yydifg buy cialis professional Xhgla
canadian pharmacy viagra canadian pharmacies online pharmacy canada
Dxegie cirfse casino game Rqyjz
pharmacy drugstore online best online pharmacy ed medications
24 hr pharmacy online pharmacy best ed medication
can you get viagra without prescription buy viagra online in australia\_’ viagra canada [url=http://llviabest.com/]viagra discounts[/url] ’
do you need prescription for cialis cialis forsale cheapest cialis in australia [url=http://cialijomen.com/]cialis brand name without prescription[/url] ’
viagra for woman how to get viagra best viagra price [url=http://acialaarx.com/]generic viagra free shipping[/url] ’
30 day free cialis how much does cialis cost without insurance price of cialis at walgreens [url=http://mycialedst.com/]cialis cheap free shipping[/url] ’
cialis cheap cialise without perscription cheap cialis generic online [url=http://phrcialiled.com/]generic cialis price[/url] ’
brand viagra dizzy right after viagra buy viagraa online [url=https://canadianpharmacy-usx.com/organic.htm]viagra sold cheap[/url] ’
brand name cialis online cialis generic cialis with dapoxetine 80mg [url=http://cialmenshoprx.com/]what is cialis black 800mg[/url] ’
cialis 5 mg cialis legal online cheap cialis [url=http://loncialis.com/]mex rx cialis[/url] ’
cialis with dapoxetine montreal drug cialis generic cialis dapoxetine [url=https://impotencecdny.com/info/history.php], cialis[/url] ’
cheap viagra generic Coversyl viagra dopoxetine [url=http://erectilejyzd.com/]Levaquin[/url] ’
how to get female viagra sildenafil 25 mg daily average price of sildenafil in usa 100mg [url=http://canadianpharmacy-yy.com/Fitness/how-to-get-a-six-pack.html]generic viagra prescription online[/url] ’
cialis for daily use disount Baclofen cialis reviews patients [url=https://impotencecdny.com/]Indinavir (Cipla Ltd)[/url] ’
viagra sales astralia viagra recipe doctor viagra asking
newest viagra walmart viagra viagra online store forum
legitimate online pharmacies panacea pharmacy ed meds online
real cialis on line ordering brand cialis no prescription online cialis
cialis online no prescription http://llecialisjaw.com/ cialis for sale brand
private money loan lenders bad credit personal loans not payday loans south africa no fee payday loans no credit check
average age for viagra paypal viagra in canada buy brand viagra in canada
go green cash advance how to get cash advance from my capital one credit card cash advance cimb credit card
buy dissertation online – edit letter research paper website
canadian generic viagra viagra alternatives viagra and cialis together
best time to take viagra 100mg what happens when you take vi...
viagra vs cialis price viagra precio substitutes for viagra...
buy generic viagra online us pharmacy no prior prescription...
canadian no prescription pharmacy cialis buy cialis using pa...